"Transaero" - ngowokuqala yangasese yezindiza Russian. Usuku ukusungulwa kwenkampani ebangela ngonyaka 05.11.1991. Yingaleso sikhathi lapho eqala waqaphela ezindizayo yakhe yokuqala ku-inkampani izindiza ngaphansi ikhodi UN. Kakade ngawo-1993 inkampani zezindiza waqala ukufeza izindiza ezindizeni omhlaba kanye ezifuywayo, edlulisela izindawo zabo.
"Transaero" - njengoba kwakunjalo
Le nkampani inikeza anhlobonhlobo amasevisi kumakhasimende ayo, kokuba eklasini lakho inkonzo arsenal 4. inqubomgomo Intengo savela ngendlela yokuthi amathikithi ayatholakala kunoma ubani amakhono ehlukene ngokwezimali.
Abashayeli nabaphathi ababeqeqeshwe njalo endaweni ephezulu ikilasi izindiza ngamazwe. Lokho avunyelwe ngokugcwele igcine futhi yenze ngcono izinga lenkonzo umgibeli.
Ngo-2007, "Transaero" isibe yenethiwekhi kuqala, okuyinto eyenziwa ukudayiswa e-amathikithi inthanethi. Lokhu kanye nezinye kwentuthuko amaningi aye avuma ukuba inkampani ukungena phezulu 50 izindiza ezihamba phambili emhlabeni.
Ukuqothuka "Transaero" yezindiza
Ekuqaleni, ngo-Okthoba 2015 inkampani bayeka ngokuthengisa amathikithi ngenxa yobunzima zezimali. Yingaleso sikhathi lapho ukuphathwa kwenkampani, kwanqunywa ku isidingo ukudala isevisi ekuhloleni isimo "Transaero" indiza abagibeli abathenge amathikithi ngaphambili. Kuze kube ngo-December 15, 2015 omunye ezinkulu Russian emoyeni yenethiwekhi "Aeroflot" Usuziju- ukuthutha abagibeli we yezindiza ungeke uzithole usuwile.
Ngakho, ukuqinisekisa asikho isidingo ukubiza ocingweni call centre, ukuthola isimo sendiza ye "Transaero". Ngenxa yale njongo-ke kwakudingekile ukuze uye kuwebhusayithi esiphathiswa sika futhi esigabeni efanele ukucacisa igama lakho kanye negama zesi-Latin (njengoba kuboniswe kwi ithikithi uthenge), faka inombolo yendiza (ngaphandle uhlamvu lokuqala UN amagugu) kanye nezinsuku uhambo.
Ebuyekeziwe isevisi "Transaero"
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile abagibeli kwakunesidingo hhayi kuphela ukufunda indiza "Transaero" isimo, kodwa futhi ukuthola amanye zikhathi ukhiye we indiza, kudingeka ukubuyekezwa isevisi, ukuze akhulule inkampani call centre. Futhi 18/10/2015, isevisi seluphothuliwe. Manje inikeza ulwazi hhayi kuphela ekutheni indiza kuyokwenzeka, kodwa futhi esikhundleni ndiza, sezindiza kanye nesikhathi, uma esikhundleni eyodwa noma ngaphezulu nemingcele.
Naphezu kwazo zonke lezo ngcono ohlelweni, abagibeli abaningi baye baphawula ukuthi isimo "Transaero" isimo sendiza ayilungile ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, abanye izindiza eziye kwenziwe, futhi uma Kwavezwa ukuthi sahoxiswa. Futhi ngokuvamile, uhlelo yokubhuka lonke egqoka kunezinxushunxushu. Ochwepheshe abaningi banomuzwa wokuthi lezi zenzo zibangelwa umsebenzi nakancane ahlangene izindiza ezimbili.
Ukuze irekhodi, ngoMsombuluko 19/10/2015, i- "Transaero" ukhansele izindiza ezingaphezu kuka-80, zombili izindiza ezifuywayo international. Ngakho-ke, hlola isimo ukundiza "Transaero" sekungamakhulu iningi abagibeli udaba nezokusigcoba.
Kungakhathaliseki kukhona engozini 2017?
Okwamanje SAA ongalifezi izindiza noma yiziphi izindawo. Izikhungo wadala abagibeli ukuze bakwazi ukwazi isimo indiza "Transaero", manje buthule. ukuphathwa kwenkampani yaphinde yamemezela inhloso yayo ukuze uqhube izindiza eziya wamanje 2017, kodwa igama elihlukile.
Amanani ekweletwa abakweletwayo kuzodluliselwa esikhundleni ifa "Transaero". Njengoba wazi, eziningi izikweletu esiphathiswa. Ukuze avuselele izindiza kuzodinga ukutshalwa ngemali okukhulu: lena iqoqo izisebenzi ezintsha, ilayisensi air zokuthutha, imikhumbi kanye nokunye. izindiza eziningi nobunzima zezimali embonini yezindiza. Ngakho manje-ke wonkhe umuntfu kweyeme etinyatselweni izinhloso ababolekisi ezingaba khona.
Isikhumulo sezindiza "Ramenskoye": umlando, ukwakhiwa, ngombono
Uhlu zezindiza eMoscow: umgibeli, ukuhlolwa, lempi